Allgedo.com » Qarax xooggan oo Beledweyne lagula eegtay ciidamada Itoobiya
Home » News » Qarax xooggan oo Beledweyne lagula eegtay ciidamada Itoobiya Print here| By: allgedo.com:
Jawaabaha waa la xiray Qarax xooggan ayaa saakay ciidamada Itoobiya lagula eegtay Magaaladda Beledeyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Qaraxan ayaa waxaa uu ahaa Bambo nooca dhulka lagu aaso ah waxaana lala beegsaday ciidamada Itobiya xili ay marayeen gudaha Magaaladda.
Dad kusugan Beledweyne ayaa AOL usheegay in ku dhawaad 4 kamid ah ciidamada Itoobiya ay ku dhinteen qaraxa kuwa kalana dhaawacyo kasoo gaareen.
Ciidamada Itoobiya ayaa rasaas xooggan furay markii qaraxa uu dhacay kadib, waxaana soconaya howlgalo lagu baadi goobayo kuwii ka danbeeyay qaraxaas.
Marar badan ayaa sidaan oo kale qaraxyo loola beegsaday ciidamada Itoobiya ee kusugan Magaaladda Beledweyne.